Iwe unofanirwa kutengesa iyo Apple Watch? Reactivate activation kukiya pamberi | Ndinobva mac
Uye ndezvekuti pamusoro pekuve nechigadzirwa chakachengeteka, chatiri kuda patinotengesa chigadzirwa cheApple ndechekuti chinotevera kuchishandisa chinogona kuzviita pasina dambudziko, ndosaka zvichikosha kubvisa zvirimo muawa basa ratinofanira kuita dzima activation kukiya.
Mupfungwa iyi, kana tichifanira kutumira wachi kuApple yehunyanzvi sevhisi, kuipa kana kutotengesa, zvakakosha kuita nhanho iyi kuti munhu anoigamuchira agone kushanda nayo pasina matambudziko. Chaizvoizvo iyo yazvino iCloud system yakachengeteka kwazvo mune izvi uye kana tikasatevedzera nhanho idzi, munhu anogamuchira wachi haazokwanisa kuishandisa.
activation kukiya usati watumira iyo Apple Watch
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuita backup yewachi kana tiine kana tichida kuishandisa mune ramangwana chishandiso, pamusoro peiyo data, zvibudiriro zvakawanikwa uye mamwe menduru anochengetwa muICloud. Saka kuita negadziriro yeparutivi iri nyore sezvo unpairing ari Apple Watch kubva iPhone, uye ichi ichagadzira backup yemudziyo kuICloud kana iTunes.
Kamwe kana kopi yaitwa, kudzima wachi isu yatinofanira kutevedzera nhanho idzi:
NeApple Watch ne iPhone pamwe chete, tinovhura iyo Apple Watch app yeiyo iPhone uye tinya Wangu wachi.
Tinya zita reiyo wachi kumusoro kwechidzitiro, wobva wadzvanya
Isu tinosarudza Unlink Apple Watch. MuApple Watch Series 3 (GPS + Cellular) pane mamwe matanho, tinofanirwa kumanikidza Delete chirongwa [opareta]. Kana isu tisiri kubatanidza imwe Apple Watch neiyo iPhone, ungangoda kuonana nemutakuri wako kuti ubvise kunyorera kwako data
Isu tinonyora pasiwedhi yeApple ID uye tinosimbisa
Aya matanho anogona kuitwa kure, asi zviri nani kuzviita usati waendesa yako Apple Watch. Muchiitiko chekuti nguva yatononoka tinogona kuwana kuburikidza neICloud.com so Iwe unofanirwa kutevera matanho aya kubva pawebhu kudzima activation yekukiya:
Takapinda iCloud.com uye isu tinopinda mukati medu Apple ID
Ngatitsvagei yangu iPhone uye sarudza Zvese zvishandiso> Apple Tarisa
Dzvanya pa Delete Apple Watch. Tinosarudza Inotevera kusvikira mudziyo wabviswa zvachose
Isu tinobvisa APple Watch kubva kuICloud nekudzvanya pane
padyo neako Apple Watch uye voila
Rangarira kuti hatifanire kupa aya makiyi eICloud kune chero munhu kuti abvise wachi kubva kuaccount yedu kana zvimwe, tine simba rese rekubvisa chero Mac, iPhone, Apple Watch, iPad, nezvimwe, kubva kumba kwedu kana chero komputa, saka kwete mumwe anofanira kuziva yedu iCloud pasiwedhi zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iwe unofanirwa kutengesa iyo Apple Watch? Reactivate activation kukiya pamberi
Unofanirwa kungwarira nezve kuitengesa pasina kubvisa zvese zvainazvo mukati.
Steve Jobs 'basa chikumbiro chakatengeswa chinosvika $ 174.000
Rongedza makarenda ako neruvara kuti uite zuva rako nezuva kuve nyore